एकदम पक्का कुरा
आज हामीलाई चाहिएको 'राष्ट्रियता कता? दिवस' नै हो । र, यो एकदम पक्का कुरा हो ।
भद्रगोल शर्मा | Published on 2017-01-11 |
देश उहिलेकै चालले चल्दैन । पृथ्वीनारायण शाहको पालाजस्तो, जङ्गबहादुरको समयजस्तो, महेन्द्रको तन्त्रजस्तो, पञ्चायत कालजस्तो, प्रजातन्त्रपछिजस्तो र गणतन्त्र आउने सालजस्तो गरी देश अब कहिल्यै चल्दैन । समय हो, समय थियो, पार भयो । समयसँगै चलिरहँदा उहिल्यैजस्तो केही पनि छैन । र, हुने छैन पनि । उहिलेका कुराले, उहिलेको चालले, उहिलेको तालले देश चल्दैन । यो विषय नजान्ने/नबुझ्ने कोही छैन । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
एक्काइसौं शताब्दीमा देश चल्ने, चलाउने तरिका बेग्लै छ । सरकार चल्ने, चलाउने अलग तरिका छ । एक्काइसौं शताब्दीमा सरकार चलाउनेले पनि चन्द्र शमशेरले जस्तै जनहितका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानोस् भनी सोच्नु हाम्रो मुर्खता मात्रै हो । र, यो एकदम पक्का कुरा हो ।
कुरो स्पष्ट छ, सनातनी पाराले सरकार चल्दैन । पेल्न, ठेल्न, अत्तो थाप्न नसक्नेहरुले एक्काइसौं शताब्दीमा सरकारबाट केही आशा नगरेकै राम्रो । जुनसुकै रङ्ग र ढङ्गको भएपनि जसले अलि पेल्न, ठेल्न, धकेल्न सक्छ सरकार उसैको हो । मरिसकेका र मरिमरि बाँचेकाहरुका बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने काम सरकारको हैन । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
एक समय थियो भुरे-टाकुरे राजाहरुको । त्यसपछि समय आयो पृथ्वीनारायणको । त्यसपछि राणाहरुको पालो आयो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, फेरि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो । अहिले हामी बाँचेको नयाँ समय हो । हाम्रो नेपाल नयाँ नेपाल हो । नयाँ नेपालमा सरकार नयाँ, वस्तुस्थिति नयाँ, परिस्थिति नयाँ, अभ्यास नयाँ, स्टाइल नयाँ । अब हामीले पहिलेजस्तो जनहितकारी सरकार नखोजे हुन्छ । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
राजा नै एकादेशको कथा भइसकेपछि उबेलाका राजाको अर्ति-उपदेशकै पछि लागिरहनुपर्ने कुरा केही छैन । पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए रे, नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो । आज हामी तरुलबाट पिँडालु भइसकेका छौं । अब तरुलकै मन्त्र घोक्नु जरुरी रहेन । पिँडालु भइसकेपछि गानो, गाभा, छाउरा, जरा हुनु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । पिँडालु र तरुलको सिद्धान्त यौटै हुँदैन । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
उनले भन्थे रे, घुस लिन्या र दिन्या दुवैथरी देशका शत्रु हुन् । यो पनि उहिलेको कुरा भैसक्यो । नयाँ नेपालमा घुस लिन्या र दिन्या बाहेक तेस्रो वर्गका मानिसहरु सायदै सार्वजनिक क्षेत्रसँग जोडिएका होलान् । प्राय: मान्छेहरु यी दुईमध्ये यौटा वर्गमा परेकै हुन्छन् । विशिष्ट श्रेणीकै कर्मचारीहरुले समेत भूतपूर्व हुनेबित्तिकै आफुले घुस दिएर काम अर्‍हाएको खुलासा जो गरिसकेका छन् । त्यसैले घुसको सिद्धान्तलाई पृथ्वीनारायणकै आँखाले हेर्नुपर्ने अवस्था अब छैन । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा भनेका थिए रे- जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु । समय बदलियो । हामी बदलियौं । हाम्रो अर्थतन्त्र सबै लम्पट भइसक्यो । आज हामी कसैसँग भिड्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । यति भइसकेपछि जाइ र झिकी कटकको प्रश्न कहाँ बाँकी रह्यो र ? न जाइ कटक, न झिकी कटक । अर्थतन्त्र लम्पट । नेता लम्पट । जनता लम्पट । हामी लम्पट भइसक्यौँ । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
पृथ्वीनारायणलाई हामीले राष्ट्रिय एकताका प्रतीक भनेर धेरै वर्षदेखि मान्दै आएको हो । गणतन्त्र आइसकेपछि कति वर्षसम्म पुस २७ मात्र होइन पुस महिना नै आएन । अर्थात्, सरकारले पुस आएको थाहा पाएन । यसपालि एकाएक एकता दिवसको कुरा गर्ने, बिदा माग्नेहरुको नियत ठीक छ कसरी भन्नु ? बेठीक नियतले एकताका कुरा गर्नेहरुको बारेमा सरकारले टाउको दुखाउनु राम्रो होइन । यो एकदम पक्का कुरा हो ।
हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता संकटमा परेको छ भनेर बडेबडे नेताहरुले भनिसकेको कुरा हो । भूगोलपिच्छे, जातजातिपिच्छे, धर्मपिच्छे, पार्टी र संस्थापिच्छे राष्ट्रियताका सुत्र आआफ्नै छन् । सबै गच्छे अनुसारका राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय प्राणी छन् । यस्तो मौकामा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय भावनाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रियता कता? दिवस घोषणा गरियोस् भन्ने भद्रगोल शर्माको माग छ ।